Inoshanda sei - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Nenhanho idzi dzinokurumidza uye dziri nyore, Sunsonexpress inogona kubatsira kubvisa yako kuzadzisa misoro uye kukubatsira iwe kukwirisa bhizinesi rako. Kurumidza uye kuzadzikiswa kuzadzikiswa mune-yenguva imba yekuchengetera zvinhu uye yekutevera ruzivo
Nhano 1- Yakagadziriswa SOLUTION
Wakagadzirira kuburitsa kunze kuzadzikiswa kwako? Bata Sunsonexpress uye maneja wekuvandudza bhizinesi anozopihwa rutsigiro panguva yese yekuita. Kune mumwe nemumwe mutengesi, tichaongorora zvigadzirwa zvako, zvivakwa zvekutsvaga, musika wekutarisa, uye kupindura chero mibvunzo yaungave unayo. Mushure meizvozvo isu tichaongorora zvavanoda zvebhizinesi uye nekupa yakanakisa kuzadzikiswa uye mhinduro yekutumira.
STEPI 2- TUMIRA INVENTORY KUSUonexpress
Mushure mekunge magadzira account yako yemahara yemushandisi, ndapota gadzira ASN (Yepamberi Yekutumira Ziviso) uye utumire chigadzirwa chako kuZuvaonexpress centre. Iko hakuna mashoma mavhoriyamu anodikanwa, tumira zvinhu zvakawanda sezvaungade. Mabhizinesi anogona kutora mukana weiyo Sunsonexpress yakaderedzwa inotumirwa kunze kwekutumira mitengo.
Chikwata chedu chinogamuchira stock yako, ita zvakadzama macheki, tora mifananidzo kana kuitisa QC kune zvaunoda, wobva wawana imba yayo mune yako yakasarudzwa odhiyo kuzadzikiswa nzvimbo, unogona kuongorora nekutonga yako yeinjiniya kuburikidza account account.
Nhanho 3 - Gadzira odha
Vatengi vanoisa maodha kuburikidza newebsite yako yeecommerce, uye iwe unovaendesa kuSunsonexpress timu kungave kuburikidza neAPI, batch upload kuburikidza neCSV kana nemaoko kugadzira maodha.
Mirairo yako inogamuchirwa uye inoongororwa zvakananga kusisitimu yedu tichishandisa yedu-mumba yekuchengetera manejimendi sisitimu.
Nhanho 4 - NONGA, PAKI UYE KUKWESHA KUTEVERA
Paunenge iwe waendesa maodha munzvimbo yeaccount nguva yedu isati yatemwa, Sunsonexpress inozvipira zuva rimwe chetero kuzadzikiswa. Tichatora uye kurongedza zvakanyatsorongeka uye kuronga kutumira kwenyika dzakawanda nekukurumidza. Zvichakadaro iwe unobvumidzwa kuve nekuonekwa kwakazara uye kutonga mune yekuzadzikisa maitiro kuburikidza nenzvimbo account.
Yedu nyanzvi yekuzadzikisa timu tora uye kurongedza yako odha zvine hungwaru uye wedzera chero inoiswa kana yekushambadzira zvinhu zvaunoda.
Tiri kukupa iwe kuoneka kweichi chese chiitiko nekutevera kubva kudura kuenda kune ako vatengi pasuwo.
Nhanho 5- KUSHANDIRA GAMUZA PARASI
Mushure memamwe mazuva ekufambisa, mutengi anogamuchira mapasuru. Isu hatisi chete kuzadzisa nekuendesa chikamu chako, asi zvakare kuendesa nekugutsikana kwevatengi.
Uri kufunga nezvekushambadzira yako eCommerce kuzadzikiswa kuChina? Zvino ndapota taura nesu.